माडीको अयोध्यापूरीमा भगवान राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति राखिए !(फोटोफिचर) – Saurahaonline.com
माडीको अयोध्यापूरीमा भगवान राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति राखिए !(फोटोफिचर)
सौराहा अनलाइन | २०७८, ८ बैशाख बुधबार
चितवन : चितवनको माडी अयोध्यापूरीमा नवनिर्मित मन्दीरमा भगवान राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति राखिएको छ । हजारौंको उपस्थितीमा माडी नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित माा कृष्णनगरमा मूर्ति राखिएको हो । करीव १ सय विगाहा क्षेत्र रहेको सो स्थानमा १६ लाखको लागतमा मूर्ति राख्न मन्दिर निर्माण गरिएको थियो ।
अहिले राखिएका मूर्तिलाई पछि मूल मन्दिर बनाएर राख्ने योजना रहेको अयोध्याधाम प्रचारसमितिका संयोजक श्री दवाडीले जानकारी दिए । मूर्तिलाई माडीमा लगेपछि परशुराम कुण्डको जलले जल अभिषेक गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेश नं. २ का प्रमुख राजेश अहिराज, बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसहितको उपस्थितिमा मन्दिरमा मूर्तिको राखिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भानुभक्त ढकालले माडीको अध्योयापूरीमा भगवान रामको जन्म भएको यथेष्ट प्रमाण भएको बताए ।
रामधामको गुरुयोजना बनाएर थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । माडीका सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि आयोग गठन गरेकोले विषयलाई धेरै नछाल्न उनले आग्रह गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अयोध्याधामको विकासका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने बताए ।
मूर्तिसहितको रथयात्रा टोली दिउँसो ३ बजे माडी आइपुगेको थियो । माडी नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा स्थानीय समुदायले घर घर अगाडि घडा राखेर ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न थारु संस्कृती झल्कने झाँकीहरुको प्रर्दशन गरिएको थियो ।
मंगलवार विहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूजाआजा गरेर बालुवाटारबाट विदाइ गरेका थिए । रथ यात्रासहित ल्याइएका मूर्तिलाई आज बिहान देवघाट सङ्गमस्थलको पवित्र जलले जलाभिषेक गरेर देवघाटबाट बिदाइ गरिएको थियो ।
चितवनको दासढुंगा नारायणगढ, चौविसकोठी, विकास चोक, पटिहानी हुँदै रथयात्राको टोली माडी आएको थियो । रथयात्रामा सयौं मानिसहरु सहभागी भएका छन् । पर्साको ठोरी, भरतपुर लगायतका ठाँउबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु माडी आएका छन् ।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्म माडीको अयोध्यापुरीमा भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहाँ राम मन्दिर स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा तीन महिना अगाडि नै बालुवाटारमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति बनाइएको थियो ।
चितवन निकुञ्जमा चालु आर्थिकमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु २०७८, ३१ बैशाख शुक्रबार
हात्तीको छावालाई ‘शेषचन्द्र गज’ नामाकरण २०७८, ३१ बैशाख शुक्रबार
खरबुजा खेतीबाट मनग्य आम्दानी पूर्वी चितवन किसान २०७८, ३१ बैशाख शुक्रबार
सपना भिलेजद्धारा भरतपुर अस्पताल र ईच्छाकामना गाँउपालिकालाई १५ वटा अक्सिजनसहितको सिलिण्डर हस्तान्तरण (भिडियो) २०७८, ३१ बैशाख शुक्रबार
राजेन्द्र महतो जसपा संसदीय दलको नेतामा चयन २०७८, ३१ बैशाख शुक्रबार
चितवनमा अक्सिजनको अभाव २०७८, ३१ बैशाख शुक्रबार
चितवन निकुञ्जमा चालु आर्थिकमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु
चितवन : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्तीले आक्रमण गर्दा हिजो जनाको ज्यान गएसँगै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म.....
हात्तीको छावालाई ‘शेषचन्द्र गज’ नामाकरण
खरबुजा खेतीबाट मनग्य आम्दानी पूर्वी चितवन किसान
सपना भिलेजद्धारा भरतपुर अस्पताल र ईच्छाकामना गाँउपालिकालाई १५ वटा अक्सिजनसहितको सिलिण्डर हस्तान्तरण (भिडियो)
राजेन्द्र महतो जसपा संसदीय दलको नेतामा चयन
चितवनमा अक्सिजनको अभाव
चितवन समाज अष्ट्रेलियाद्धारा भरतपुर अस्पताललाई अक्सिजन हस्तान्तरण
कोरोना अपडेट : थप ८ हजार ५२० जनामा संक्रमण पुष्टि, २०३ जनाको मृत्यु
एसइई परीक्षाबारे चाँडै निर्णय गरिने